Saldanadii Baargaal -qaybtii 1 aad | Ruunyo
← Somali Flag Pictures& buttons
Welcome to Somaliland chat room →
” Waxaa la ii diray Mukulli si aan hub u soo iibiyo. 600 oo wan ayaa doon la ii saaray. Saddex lool oo dahab oo uu garaamkoodu ku qoran yahayna boqorka ayaa ii dhiibay. Lacag melyan gaaraya oo isugu jirta Qirish iyo Rubiyad ayaa kiishado la iigu guray.Waxaa kale oo la ii dhiibay waraaq uu igu yiri gaarsii suldaan Gaceyti. Doonidii baan ku dhacay. Markay Mukulli gaartay baan askartii ku iri : Arigan suldaanka ayaa lehe ha layga dejiyo.
Daartii saddex maalmood baa inoogu dhamaatay. Kaddib ayuu suldaankii inoo yeeray. Waxaan horay u soo qaatay loolkii dahabka ahaa iyo waraaqdii aan suldaanka u waday. Waxaan u imid isaga oo fadhigii iyo kuraatsiiba hagaajiyay. Wuxuu ku lebistay qamiis culus oo oogada dahab ku leh. Taaj dahab ah buu madaxa saaray. Isaga iyo nin wasiir u ahaa ayaa meel halkoo ah ka soo jeeda. Waxaa ley baneeyay kursi suldaanka dhiniciisa ah. Markaan soo galnay ayaa nin dhawaaqay oo dadkii ku yiri : “Istaaga”.
Suldaanku madaxa ayuu ridayay intii waraaqda la akhrinayay oo wuxuu la yaabanaa ereyada carabiga ah oo ku qoran waraaqda. Markii la dhameeyay buu yiri : ” Ii dhiib waraaqda”.
Waa loo dhiibey. Markaasuu jeedaashey waraaqdii. Misana Xaaji Cismaan buu jeedaashey “.
” Suldaankii baa marna Xaajiga eega, marna dahabka hortiisa yaal, marna waraaqda gacantiisa ku jirta. Kaddib Xaajigii ayuu su´aalay oo ku yiri : Ma nin Carab ah baa soo qoray waraaqda ?
Subaxdii baan doonidii soo aaday, mase rasaastii iyo qoryihii waxay diyaar ku yihiin xeebta. Doontii baa ley saarey, dabadeed Shixir ayaanu tagney. Waa nalagu soo dhoweeyay. Waxaa leynoo sheegay in waraaq ka timid suldaankii, sidaa darteed in leynoo jebinayo sicirka “. (Xaajiga waxaa ka weriyay Maxamuud Aw-Yuusuf).
” Iska daaya, kani waa Keene – diide ” oo uu ula jeeday in uusan oggoleen in uu hoggaansamo.
Muddo toban sanadood ku dhow ayuu Yuusuf ka ganacsanayay dalalka Khaliijka Carabta. Sanadkii 1878-kii wuxuu ku soo laabtay dalka. Laakiin markan wuxuu la soo laabtay aragti ka duwan tii hore ee uu qabay. Sida ku xusan sheekooyinka Soomaalida, Yuusuf Cali wuxuu ka soo degay meel kamid ah xeebta magaalada Hobyo. Degmadu waxay lahayd ceel biyo macaan iyo Khoori dabiici ah, taas ayaa waxay sabab u ahayd in ay marar ku soo leexdaan doonyaha degaanka maraya. Yuusuf wuxuu hoggaaminayay tiro doonyo ah oo ay la socdeen dadkii isaga la xulufada ahaa. Waxaa kale oo weheliyay farsamo yaqaano Carab ah (Meheri). Doonyaha waxaa u saarnaa hub, qalab dhismo, raashin iyo alaabo hadiyado ah. Yuusuf oo dhowr jeer oo hore, degmada yimid ayaa markan odeyaashii degaanka la dhigtay heshiis uu ku doonayay in si ku meel-gaar ah uu degaanka ugu noolaado. Ujeeddada Yuusuf Cali ayaa markii hore ahayd in uu cashuuro ka qaato doonyaha halkaas imanayay. Yuusuf ayaa mashruuciisa ka qarsaday beelihii Hawiye (Habar – Gidir) ee degaanka ku noolaa. Waxaa dhacday in beeluhu ay dareensadeen markii uu isku deyay in uu qalcad wayn ka dhiso degmadii Hobyo. Muddo gaaban kaddib, waxaa bilowday kacdoon ay beelihii degaanku kaga hor imanayeen mashruuca Yuusuf Cali uu damacsanaa in uu halkaas ka hirgeliyo. Kaddib markii uu hiilo ka helay beelaha Daarood, gaar ahaan kuwa Majeerteen ee degaanka ka ag-dhowaa, ayuu Yuusuf Cali ku guulaystay in uu muquuniyo kacdoonkii beelihii Hawiye. Dabadeed wuxuu halkaas ka asaasay saldanaddii Hobyood ee uu suldaanka ka noqday, dabadiisna uu wiilkiisii Cali Yuusuf dhaxlay. Saldanaddaas oo cimrigeedu ahaa 49 sano, waxaa burburiyay Talyaanigii, sanadkii 1927-kii.
1. Xadka waqooyi – Togga Nugaal.
2. Xadka koonfur – degaanka degmada Ceel-buur.
3. Bariga – xeebta bad-waynta Hindiya.
Posted on November 28, 2007, in Uncategorized. Bookmark the permalink.	Leave a comment.